Daawo Sawirada Soo dhaweyntii abid ugu Weyneyd oo Paris loogu Sameeyey Xulka France | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Soo dhaweyntii abid ugu Weyneyd oo Paris loogu Sameeyey Xulka France
(16-7-2018) Geesiyaashii dalka France u qaaday koobka qiimaha badan ee Adduunka ayaa dib ugu laabtay Caasimada dalkooda ee Paris halkaa oo ay ku soo dhaweeyeen kamanaan kun oo ah Taageerayaal aad ugu faraxsan Guusha ay u soo hooyeen dalkooda.
In kabadan 500,000 oo ah taageerayaal Wata Calanka dalka France ayaa isugu soo baxay Fagaaraha bartamaha Magaalada Paris kuyaal ee the Champs-Elysees halkaa oo ay soo Gaari doonaan Cayaartoyda Xulka qaranka France oo wata koobka quruxda badan ee dunida kaas oo ay ku Guuleysteen Axadii lasoo dhaafay.
France ayaa ku Guuleysatay koobaka aduunka 20 sano kadib waxaana ay horay u qaadeen sanadkii 1998 dii markaas oo ay iyagu marti geliyeen waxaana ay Finalkii 3-0 kaga badiyeen Braziil oo ahayd dalkii difaacanayey koobka aduunka maadaama ay qaadeen 1994 tii.
Cayaartoyda Xulka dalka France ayaa galabkii isniinta ka soo degay Garoonka Charles de Gaulle Airport waxaana jira in dadweynaha dalkaas ay saacado aad u fara badan kusugyeen halka loogu tala galay in ay ka dhacdo soo dhweyntaan oo ka mid ah kuwii ugu layaabka badnaa ee abid loo Sameeyo wadan qaaday koobka aduunka.
Weli Xiddigaha france masoo gaarin Goobta balse wax yar kadib ayey soo mari doonaan iyaga oo saaran bas dusha ka furan sida Caadada ah.